Dhuusamareeb : Mahad Salaad iyo FIQI oo Kulan la Qaatay Madaxwaynaha Galmudug Qoor-Qoor [Sawirro] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Dhuusamareeb : Mahad Salaad iyo FIQI oo Kulan la Qaatay Madaxwaynaha Galmudug Qoor-Qoor [Sawirro]
Mar 22, 2020 - 19 Aragtiyood
Dhuusamareeb ( Kalshaale ) Waxaa magaalada Dhuusamareeb maanta soo gaadhay Xubno ka tirsan Xildhibaanada Mucaaradka ee ka soo horjeeday hannaankii Doorashada Galmudug ee ee lagu doortay Madaxwayne oorqoor.
Xildhibaanada soo gaadhay Dhuusamareeb waxaa kamid ah Mahad Salaad, Axmed Macalin Fiqi iyo Cabdisaabir Nuur Shuuriye, waxaana Xildhibaannadan iyo Madaxweynaha Galmudug ka wada hadli doonaan dardar gelinta dib u heshiisiinta, si iyadoo loo dhan yahay Munaasabadda caleema saarka Madaxweynaha Galmudug looga qeyb galo.
Waxay kulan la qaateen Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, iyagoo kala hadlay sidii looga shaqeyn dib u heshiisiinta wixii tabasho ee ka dhashay doorashadana loo xalin lahaa.
“Kulan gogol xaar iyo dib u heshiisiin Galmudug ah oo maanta aan ku soo gaarnay magaala Madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb.” Ayuu yidhi Xidhibaan Mahad salad.
Booqashada Xildhibaanada Mucaaridka ku ahaa Madaxwayne QoorQoor ay ku yimaadeen Dhuusamareeb, ayaa ka dhigan inay Aqbaleen Doorashadii ay markii hore dhaliileen, Waxaana xusid mudan in Madaxwaynaha Galmudug oo Meesha ka saaray Kooxdii Ahlusunah oo Caqabad ku ahayd Horumar iyo Wadajir ka hirgala deegaanada Galmudug.
“Xanuunada kala tagista iyo isfaham-darrada oo idil waxaaa lagu daweeyaa kulamo cusub oo lagu baadi-goobayo xalka, kumana sii jirto marka arrintu ay taabanayso masiirka iyo mustaqbalka umadeed iyo tan deegaan.
Waxaan maanta ku nimid Magaalada Dhuusamareeb oo ay noogu danbaysay bishii hore bilowgeedii socdaal xal raaadin iyo dibuheshiisiin ah si Galmudug u tiigsato horumarka dadkeedu ku taamayaan, maamul midaysanna uga hanaqaado.” Ayuu yidhi Xildhibaan Fiqi.
Ama ha buuqeen ama ha mudaharaadeen Caruurta Reer TANAASULE waxaa u dambeyn iney TANAASULAAN.
Hadduu Awoowgaa Tanaasulijirey
Aabahaana wuu Tanaasuley
Adiguna waxaad ku qasbantahey inaad Tanaasusho.
1. C/llaahi Ciise oo ka Tanaasuley Xukuumaddii ku meelgaarka waqtigii Gumeystaha
2. Aadan C/lle oo katanaasuley Xukuumaddii Xoriyadda
3.Cali Mahdi oo ka tanaasuley Xukuumaddii Democracy soo celinta
4. C/qaasim oo ka tanaasukey Xukuumaddii Kumeel gaarka
5. Shiikh Shariif oo ka Tanaasuley Xukuunaddii Midnimo Qaran
6. Xassan Shiikh oo Ka Tanaasuley Xukuumaddii Federaalka
* Tartan iyo Tanaasul waaye Tubtii Towraddeena.
Habar gidir waxbay soo fahmayaan.waxaad moodaa inay waalidii casayd iska dhaafeen oo hadeed wixii dan ah loo jeestay.
Dagaalka ay Reer Garoowe wadaan waxa uu salka ku hayaa Galmudug.Dikada Hobyo ma dhaafsana.
Nidaamka galmudug ma dhaafsana.
Deganaashaha Muqdisho ma dhaafsana.
Waagii ay Muqdisho hocasay,wax hadalka ama somalinmo ku salaysan lagama maqal Garoowe.
Garoonka Gaalkacayo ayaa shidnaa,Dikada Bisaso ayaa shidnayd.Reer Garoowe aamus ayay ku jireen kkk
Garoonka Muqdisho wuxuu la wareegay shaqadii garoonka Gaalkacayo,shaqadii degaanka kuunfurta ee ganacasiga waxaa la wareegay Dikada Muqdisho.
Dikada kale oo laga dhisayo Hubyo waxay keentay khalkahl ku dhacay Garoowe.
Dabka waxaa ku sii shiday Ahlusuna oo meesha laga saaray iyo xaaf oo is-dhiibay.
Shaki kuma jiro inuu dagaalka Garowe yahey
Galmudug iyo dekedda Hobyo
Waxaan ogeyn dhibaataddii laga soo marey maslaxeynta Puntland waqtigii dhismihayey Gakmudug
Waxaan ogeyn qeyladdii laga soo marey waqtigii Farmaajo booqdey Dekedda Hobyo
Waxaan ogeyn wixii waraaqo loo qorey waqtigii Kheyre uu ansaxiyey Kharashka Dekedda Hobyo.
> Sedex ayaa ugu daran
– Faqiir Buqeyl ah
– Fuley Booto badan
– iyo CAJUUSO MASEYR BADAN
Waa kuwaa wiilashi Hiraab caanaha
Wadaagaya e wada qoslaya doqonta
Mooda marka xooga la kala dhacsanayo
In la kala tegey o aan Leeysu so
Farxada ka muuqata ilaahow il
Cadaw Idinka haay
Kuwaan waa qowleysato waxaa usoo caqli celiyey kheyre oo yiri dad iskadhiga oo xataa igusawir soo sameeya
Hiraabkii ma hadda ayey naftii kusoo noqontahay..
Hadday inta dad noqdaan nidaam iyo kala dabayn sameeyaan sacabka dayacan keliya uma roona ee dalkaan gobolada sparada dhigteen ayaa isku furmi lahaa.
Kuwa Puntland uga dhegtay oo qabyaalad la ildaran, Majeerteen waxay weligood ahaayeen Boqortooyada dhulka xukuntay ilaa maanta agoontii marka isku dhex yaacaan nidaam u dejisa iyo wado ayey raacaan.
Federal u keenay, dastuur iyo labo gole parleman.
Waxaa kale oo tusnay sida maamul goboleed u shaqeeyo oo maanta looga dayanayo, waxwalba.
Haddii madaxweynaha Puntland surweel dabagaab salaanta ku qaato kulli beri surweel badagaab salaanta ku qaadan….kkkkkkkkkk
Wadada u jeexnay cidda ka leexato sida hadda kuwa N&N way isku dhex yaacin…..
Waxaad arkin ayagoo ku waashay diyaaraddii timaada Deni ka raadinaa, yaa raganimaas leh gobolada kale.
Macal Siyaad Bare ayaa yiri : Faraha mid baa ka dheer” waa balan in la simo….kkkkkkkkk
Waa tay wixii dhiiglahow kaca ka dhacday, ilaa aakhirtii jafjaf oo dhan ku kacay…kkkkkkkkkk
Puntland rag rag dhalay, Somalia indho u ah.
Furaha Somalia Garoowe ayuu yaal.
Nidaankii ku aragto Somalia Garoowe lagu alifay macal Calanka Somalia oo buulugga ah.
“Calankayagow cawaale, waadna caawisay…”
Allow u naxariiiso Maxamed Cawaale Liiban.😎
Somalia hal mar ayaa nidaam Majeerteen wax ka ogeyn laga sameeyey oo Kacaankii hantiwadaaga, waana tii geeljirtii hor boodaysay dalkii qar kala dhaceen….xey dowlo ka kakasaayaan.
Talyanigii ayaa dalka uga saarnay jabhaddii SYL oo Majeerteen hogaaminayey, Xaawo Taako waa reer Bossaso, Dhagaxtuurkii waa dhalinyaradii SYL.
Kuwa hadda maha unukaa leh yiraada markaas xagee la jiray? Moxog iyo Waabe iyo Gocoso la qodanayey maahoo.
Hadde waa dadkii ayagoo kabo go’ay xusulka surtay ilaa futo biciid kasoo lugeeyey oo la yaabi jiray markaan yaraa ayagoo degta ku guuraya.
War ha i dambaajinee Corona virus ka dhuunta.
Kkkkk@LOP Ina addeerow FAANKA xoogaa iisoo tuur Dabshid iyo Mr Bahal cirka u fiiri tolnimo.com
Kaamaba dhamaato,anigu ma naqaan
Waxaan aad daldalayso CHINESE ayaan ka nahay.Dabshid iyo Mr Bahalna waa la mid.
Meel ugaas boqor ku noqday kkkkk
Boqor Maxamed Daauud,Daarood buu u ahaa markaad babies ahaydeen waa halka reer Diini ugaasnimada ka wataan Hawraarsame lagu tag xiray,la dib markay dileen boqorkii Daarood mana ahayn boqor Somaliye wuxuu ahaa boqor 10 qofoo gubatay kkkkMJ ayaa boqortooyo ahayd Somali xukumi jiray 2020 kkkkkkk
caawa maxaa dhacay, Daanyeer Darwiish siidaa warkayga mise waa idinka guurnaa!
Dabdhid iyo Bahal
welcome to Bossaso city, Dhool Bari kasoo baxay indhihii ku dheehdaa wanaag dhaxal u yeeshay.
( Daawo Bossaso city)
welcome to Garowe city…
( Daawo Garoowe ciry)…waa diideen idin tuso U tube clip.
ma ishaad kusoo ridin?
Ma fahmanteen sababta federal loogu dhagan yahay= Dadka ayaga in wax qabsan karaan.
Haddaad Kaluun, xoolo, beero, dad nidaam yaqaan iyo dhul great Britain le’eg haysato, yaad u baahan tahay haddaad aqli leedahay..?
khayraad dabiici ah u dheeryahay.
Hadda ma fahamteen waxa Puntland muhiim ka dhigay?
Labadaas maago oo soo dhigay iyo Galkacyo waxay leeyihiin new international airports.
Week end keliya soo joogi kartaa……
Waxay kale keeyihiin 10 dekedood oo yaryar sida Laasqoray, Ceelayo, Qandala, Raascasayr, Hurdiya, Baargaal, Xaafuun iyo dekedda Bosaso, Eyl iyo Garacad.
That means Federal isdeberay.
Kudayo Puntland inta oohinta iska daysaan.🤪
Dabshid makala yaqaan Darood aka reer Qurac……
weli colaadii Hawiye iyo Darood qori u sitaa…kkkkkkkk maba arko in Farmaajo sidii Maxamed Siyaad Darood dagaal kula jiro….kkkkkkkkk.
Dabshid aniga iidaa, markuu arko Majeerteen cimaamad u xirtay ayuu warkayga dhageysan oo shaqada u diro qaban……kkkkkkkkk
Adinka ayaa tolnimo nagu sira, Darood beri hore dhintay.
Faan maaha waxa qoray waa xaqiiq jirta.
Markaan fiiriyey oo ogahay in Darood weligiis isku mowfiq noqon, magaranayo meeshii Darood mid ah ku arkay Dabshid.
Waxaan u malayn in ayeydiis uga sheekayn jirtay dagaaladii Dibara-Weyn oo Hawiye iyo Darood lagu sheego, Mareexaan Gedo u qaxay……200 sano ka hor dagaal ahaa, kkkkkk, Dhuusamareeb waxay ahaan jirtay magaalo Mareexaan oo laga bursaday….run
Mareexaanka taariiq Kacaankii ka horeysay waa u waayey.
Sanaddii Cali Yusuf, Siciid Barqash, halgankii SYL, Darawiishtii, no where to see Mareexaan.
Bal Jaale Siyaad ka hor oo niman Majeerteen wada socdeen Mareexaan meel iigu sheeg?
Waxaad oran kartaa Galduduud markii luminay Caabudwaaq nalagu ooday sow anaga Gedo u guurnay oo degnay.
Goormaan Halgan galaa anaga ayaaba qax ahayne….kkkkkkkkk
Majeerteen oo power ahaa oo dhulkiisii iyo dhulka kale u talinayey joogay nalama simi kartid.
Nin war haya hakuu waramo.kkkkkkk
Dadku sida hadda qabyaalada loogu waashay ma ahayn, markii SYL oo Xamar meel walba qas ka wada oo Talyanigii oo Xamar joogay guriyaha kasoo bixi la,yihiin ayaa haddana askar Talyanigu u shaqaynaysay mid Jareer ah Xaawo Cusman ”Taako” oo women resistance hogaaminaysay shafka falaar mariid leh uga dhuftay oo dhimatay, waxaa ku xigay shacabkii oo kacay oo dhagax kala daalay wixii Talyaani u shaqaynayey…..run
Maraykanka oo hogaaminayey wadama ku adkaaday dagaalkii 2aad adiunka, UN tiri, waa in Somalida hogaanka matala yimaado shirka UN, ma yeelayno in Talyani matalo Somalida.
Waxay reer Hobyoodkii madaxdii Cali Yusuf reer Kenadiid ( Cisman Sharmarke, Cali Sharmarke)u badnaa oo halganka hoogaminayey doorteen Cabdulahi Ciise Aun oo ahaa saraskiisha Cali Yusuf.
Markuu dhoofi lahaa ayaa la yiri waa la talaalayaa…
Somalida waxay iska dhaadhiciyeen waa cirbad sun ah, mid Cumar Maxamuud ah oo ukaa ayaa tegey safaaraddii Maraykanka asagoo Cabdulahi Ciise loo laga dhigay.. Cabdulahi wuxuu u dhoofay UN new-york asagoo warqad talaal been ah sita in talaalan yahay odaygaas wuxuu dhintay 1992.
Waxaa lagu shaaricaystaa haddii Cabduladi la talaali malaha maanta joogi lahaa..
Waxaa laga talaalayey Tetano, Tbc, etc.
Waxaa la aaminsan in u dhintay Tetano maalin midi meel ka goysay…ma hubo.
yaan la ilaawin..
Halgan kaas oo kale ayaa ka socday gobolada Waqooyi oo goonidooda u halgamayeen Engriiska.
Waxaan eray been ah kuma jiro.
Ciyaal xaafad wax aqrin, ma ila socotaan?
LOP SAAXIB, maxaad dà-yarta u marin habaabin oo aad taariikh aan Jirin 94% ugu gudbin?. ≈©≈BAL aan inyar kuu saxo, Ninka Aad leedahay (mid Cumar Maxamuud) dhowr sano ka hor baa warkiisa igu dambaysay ISAGO ku xanuunsan Gaalkacyo waxaana la dhihijiray MUJAAHID MURO “ILAAHAY SWT jannadi haka waraabshe” waa ninki MARKI ay SYL ka cabsatay in CabduLLAAHI Ciise uu Talyaanigu SUN ku duro Yiri ANIGA BEDELKIISI halay duro WAANA isu ekaayeen, SYL waxay ahaayeen kuwo nafta isu hura (Day, mid C.Maxamuuda iyo mid Sacada). ≈©≈SAAXIB kaama yeelikaro inaad Mujaahid MURO ugu yeerto “MID” oo dhadhan yasid leh ≈©≈LOP SAAXIB, waxaa kaa maqan Haddaad maanta ku nooshay Yurub oo aad wax baratay Waxaa sabab u ah dhiiga ay u daadiyeen Mudane Mujaahid MURO iyo asaagi. ≈©≈Gabadha aad leedahay Jareer Xawo Taako waxay ahayd Reer Hiiraan MANA ahayn reerkaad ku sheegtay. ≈©≈SAAXIB waxaa tiri; “Waxay reer Hobyoodkii madaxdii Cali Yusuf reer Kenadiid ( Cisman Sharmarke, Cali Sharmarke)u badnaa oo halganka hoogaminayey doorteen Cabdulahi Ciise AUN oo ahaa saraskiisha Cali Yusuf”. ≈©≈SAAXIB markaan waad xadgudubtay EE BAL CAGA DHIGO oo kala saar SYL iyo MJ. ≈©≈INUU MJ-ku jiray safka hore ee halganki Xuriyo doonka WAA mid Taariikhiya oo aysan cidina inkirikarin oo Asaasiyihi SYL AUNTE Yaasiin Xaji Cusmaan aaba ahaa. ≈©≈MAYA!!! Saaxiib, AUNTE Cabdullaahi Ciise MA ahayn askarta Cali Yuusuf ee WUXUU ahaa karraani B/weyne jooga oo wuxuu ka mid ahaa inta yar ee Somalia oo wax qori kartay, Yaasiin oo ay aqoon isu lahaayeen ayyaa dalbaday in XAMAR la keeno. ≈©≈Saxiib marka laga hadlaa Taariikhda Somali WAXAA loo bahanyahay inaad Maskaxdaada u RARTO kaybti hore ee Qarnigi tegay. WBT
Adeer kula murmi maayo waa runtaa lakiin ragga Baledweyne xukumay ayaga ruuxoodana Hoybo ka yimaadeen waana sababta loo yiraado Baladweyne xukunka Cali Yusuf ayaa ka jiray.
Aniga maba kala jecli waxa Somalida hadda taariiqda ninba sida rabo u qoro, waxaan ogahay in qabyaalada hadda na waashay jirin waagaas.
Hadalkayga dhan wuxuu u dhacaayey in reer Hobyood dad kasoo jeeda hogaaminayeen SYL.
Cabdulaahi Ciise AUN in reer Hobyood yahay..qofka taas ogeyn taariiqda been ka sheegayaa.
Reer Hobyoodkii oo qabiil macne ugu fadhiyin oo halgan ku jiray waxay Madaxweyne u doorteen Cabdulahi Ciise…xitaa oday Cumar Maxamud ah in Cabdulaali Ciise la sumayn lahaa loo maleeyey UN u socday, ninkii ugu horeeyey oo magac Somali ku fadhiya, United nations, Nation among the world nations. Waxaa dirsaday SYL. Run
Hadalkaygu sidaas u socday.
Kalshaale ma corono ayaa helay